အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: မေတ္တာထားပေးပါ ပြည်သူလူထုခင်ဗျာ
လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ကုလားတွေ မွေးချင်သလောက်မွေးခြင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးကြပါ။ (သည်းခံပါခင်ဗျာ ကုလားဆိုပြီး သုံးနှုံးမိပါတယ်) (မိမစစ် ဖမစစ်လို့ ပြောရင်လည်းခံရမှာပါ)
ဘင်္ဂလားဒေ့နယ်ဖွား နွယ်ဖွားတိုင်းရင်းသားများ မွေးချင်သလောက်မွေးဖွားခွင့်ကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါ။ မေတ္တာတရားသည် အစွမ်းထက်ပါ၏။ ထိုကြောင့် မေတ္တာပို့ကာ လည်လှီးခံမဲ့ရက်ကို စောင့်နေပါ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးခင်ဗျာ၊
မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးနှင့် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများအတွက် လူအခွင့်အရေးဆိတ်သုဉ်းနေခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်လုပ်ခွင့်မရခြင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းမရှိပဲ နေရာတိုင်းမှာ အနှိမ်ခံနေ စော်ကားခံနေရခြင်း ၊မိမိပိုင်မြေကို အလုခံရခြင်းများရှိပါက သည်းခံပါ။ ဒေသအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင် မလုပ်နိုင်သေးပဲ အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်း ပြီး အခြားနိုင်ငံက ခိုးဝင်လာသူများ၏ လူ့အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုပေးကြပါ။
မိမိအကျိုးစီးပွားကို စွန့်လွှတ်ပြီး တစ်ပါးသူ၏ အရေးကို ဆောင်ရွက်သူသည် မြင့်မြတ် သောစိတ်ရှိပါပေ၏။ ဘုရားဟောတရားတော်နှင့်လည်း ညီညွတ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အစ္စလာမ်မစ် နိင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာမဲ့ရက်ကို မုဒိတာပွားပေးကြပါ။ ဘင်္ဂါလီများအပေါ် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာသုံးပြီး သားဆက်ခြားတည်းဟူသော ဒေသန္တရ အမိန့်ထုတ်ခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။
ဥပဒေပြုအာဏာကို ပိုင်စိုးကုန်သော လွှတ်တော်အမတ်များကလည်း ကုလားများ မွေးနိုင်သလောက်မွေးရေး ဥပဒေကြမ်းများတင်သွင်ကြပါ၊၊
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥက္ကဌကြီးမှလည်းဒေသဆိုင်ရာအမိန့်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း နိုင်ငံတစ်ကာမှ ဖိအားပေး ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပေးပါ။
အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူ မည်သူ့မကိုမဆို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပေးကြပါ။ လူနည်းစု မူဆလင် ဘာသာဝင်များကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများရှိနေသည်ကို ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ။
ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီများ လွယ်လွယ်ကူကုဝင်ရောက်နိုင်ရေး ကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် လ၀က ရှိ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ အဂတိလိုက်စားခြင်း ကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြုပေးကြပါ။ မြန်မာစကား တစ်လုံးမှ မတတ်ပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ထားသူများကိုလည်း ရန်ပြုခြင်းမပြုပဲ ၊ဖမ်းဆီးခြင်း မပြုပဲ သဘောထားကြီးပေးကြပါ။
မလေးရှာနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက မြန်မာလူမျိုးများအား သတ်ဖြတ်နေခြင်းကို သဗေသတ္တာကမ္မသကာ ဟု နှလုံးသွင်းကာ ဥပေက္ခာ ဖြင့် နေထိုင်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 8:14 PM
Myo Thet Lwin June 16, 2013 at 11:16 AM
The problem here is, India is 90 percent HIndu/buddhist. You are frankly racist. if you really love Myanmar or Burmese, you should think before you write. 90 percent of muslims in myanmar are from Bangaladesh or Pakasten. Indians never want to live in myanmar due to cultural differences. or if they do they are southern indian/hindu who are black. you should really learn world history, ethnicity, or culture. otherwise, you will beavictim of Old Burmese's Military Propagenda Propagenda. more than 1 lakhs of christian chins/kachins are in INdia under political asylum under the old government who are very peaceful christian. don't make meariot buddhist( i amavery peaceful buddhist now). you should really learn many things like daw aung san su kyi or don't use blogspot for free( which is obviously british property,shame on you to be selfish and don't consider for overall myanmar's peace......
Myo Thet Lwin June 16, 2013 at 11:21 AM
For the first time in my life, I feel very shameful to call myselfapeaceful Myanmar Buddhist infront of British or American friends because of your racist comments.Don't beavictim of propagenda. You don't need to worry about Muslim population. Wentern world knows much more about you how to deal with it. Just care your own family. Or if you really love Myanmar Buddhists, help them by participating in NGO. YOu areashameful Buddhist among the world.
အမှားနောက်လိုက်မှာ စိုး သည်ထက် အမျိုးပျောက် မှာ စိ...